महाकालीमा पानीको बहाव बढ्दा १५० घर डुबानमा - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
महाकालीमा पानीको बहाव बढ्दा १५० घर डुबानमा
प्रकाशित मिति: ४ श्रावण २०७१, आईतवार
असनेपाल न्युज सम्बाददाता/
साउन ४, काठमाडौँ- सुदुर पश्चिमको महाकाली नदीमा पानीको बदेपछी महाकाली पारिका २ गाबिस चाँदनी दोधाराका करिब डेढ सय घर डुबानमा परेका छन्। नदीमा पानीको बहाव अत्यधिक भै गाउँमा पसेपछि ती घर डुबानमा परेका हुन्।
डुबानमा परेका घरका घर परिवारलाई उद्दार गरि सुरक्षित स्थानमा सारिएको कंचनपुर प्रहरीले जानकारी दिएको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले विस्थापितलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम गरिरहेका छन्’ –एक प्रहरी ।
महाकाली नदीमा पानीको बहाव बढ्ने क्रम जारि रहेकोले तटीय क्षेत्रका जनतालाई सजग रहन अलर्ट जारि गरिएको छ ।
यसै बीच महाकाली नदीमा दाउरा संकलन गएकी एक महिला सनिबार बेपत्ता भएकी छन्। कञ्चनपुरको भीनपा–१० का ५५ वर्षीया तुलसीदेवी पन्त शनिबार बेपत्ता भएकी हुन्। शारदा ब्यारेजको पूर्वतिर नदी किनारमा दाउरा संकलन गर्न गएका बेला उनलाई पानीको बहावले बगाएको स्थानीयको भनाइलाई उद्धत गर्दै प्रहरीले जनाएको छ।
महाकालीमा पानीको सतह बढेसंगै शारदा ब्यारेजमा आवतजावतमा रोक लगाइएको छ। शनिबार बिहान ४ बजेदेखि शारदा ब्यारेजमा आवतजावतमा रोक लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ। सुदूरका पहाडी जिल्लामा लगातारको वर्षाका कारण महाकालीको पानी बहाव बढेको हो।
विवादित क्रिस्चियन संस्थाले दियो प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक लाख डलरको पुरस्कार
काठमाडाैँ । विवादस्पद क्रिश्चियन संस्था युनिभर्सल पिस फेडरेसन (युपिएफ)ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई […]
‘आफूले बन्दुक नबोकेको विषय पार्टीभित्र कहिलेसम्म जवाफ दिइरहनुपर्ने ? ‘
साउन ७, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आफूले ‘जनयुद्ध’ नलडेको विषय […]
४ दिनको शिशु अस्पतालमै छोडेर आमा भागिन
असनेपाल न्युज सम्बाददाता/ साउन ८, काठमाडौँ- कञ्चनपुरको महाकाली अंचल अस्पतालमा एक महिलालले बच्चा जन्माएर […]
सर्वोच्चद्वारा तीन महिनाभित्र स्ववियु चुनाव गर्न आदेश
वैशाख ९ । काठमाडौं, सर्वोच्च अदालतले सरकार र भित्रुवन विश्वविद्यालयका नाममा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको […]
देशभर वर्षा नै वर्षा, सचेतना दुई दिनसम्म बढी
काठमाडौं । देशभर भारी वर्षाले जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । मनसुनको न्यूनचापिय रेखा नेपालतिरै रहेकाले दुई दिन […]
के होला ओली सरकार ?
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको नेतृत्वमा देउवा आएलगत्तै ओली सरकारको स्थायित्वमाथि आशंका गर्न […]